(8) Kufuphi neHot Spring, eKinugawa-Onsen. Nikko. Japhan
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMaru
-Ithatha i-5 mins Hamba ukusuka kwi-Tobu World Square Station (umgca we-Tobu kinugawa) (400m) ukuya kwi-B & B.
-Igumbi lasimahla Wifi.
-UkuPakwa kweeMoto zamahala.
-Inkonzo yeeBhayisikile zokuRenta yaMahla.
-Abantwana abaneminyaka emi-5 ubudala nangaphantsi (Bala abantwana aba-2 njengomdala omnye) Hlala ukhululekile.
-Abadala aba-4 abakhulu [+Umntwana&Abantwana(Yabelana ngebhedi)]
-Yonke yaBucala, i-2DK kuMgangatho we-3.
-Igumbi lokuhlambela labucala kunye neToilet ngokwahlukeneyo.
-4 iibhedi zeFuton eziNye (Ubukhulu W100cmX200cm)
-5mins Hamba uye eTobu Warld Squre(300m)
-23mins Hamba uye eHot Spring/Onsen. (1.9km)
-33mins Hamba uye Edo Wonderland (2.7km)
【Ukusuka kwisikhululo saseShinjuku (iiyure ezi-2)】
-JR Shinjuku isikhululo
Ukutshintshela kwi (Tobu Kinugawa-line)
【Ukusuka kwisikhululo saseTobu Nikko/Nikko Tosho-gu (30mins)】
Thatha uTobu Nikko-line (8mins)
Ukutshintshela kumgca weTobu Kinugawa (16mins)
Isikhululo seSikwere seHlabathi saseTobu.
【Ukusuka kwisikhululo senqwelomoya saseNARITA】 (iiyure ezi-3)
--- Ngololiwe (Keisei Skyliner) ---
ISikhululo seSikhululo seSikhululo se-2 saseNarita ・ 3 Isitishi
Thatha (Keisei Skyliner)
Ukutshintshela kwi (Hibiya Subway-line)
Ukutshintshela kwi (Tobu-Express umgca kuNikko&Kinugawa)
Ukutshintshela (umgca weTobu-Kinugawa)
【Ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-HANEDA】 (iiyure ezi-3)
--- Ngololiwe ---
Isitishi seSikhululo seSikhululo saMazwe ngaMazwe saseHaneda
Thatha (umgca wesikhululo seenqwelomoya saseKeikyu)
(Hamba 5mins-Indlela eQhagamshelweyo)
Isikhululo saseTokyo Skytree
Thatha (umgca weTobu-Express /Kinu#125 ukuya eKinugawa-onsen)
-Umatshini wokuvasa w/ Isicoci&eSoft
-Coca iitawuli zokuhlambela
-Ishampoo, iConditioner&Soup yomzimba.
-Iipani kunye neepod, izixhobo zaseKitchen, ibhodi yokusika & nemela.
-Iikomityi, iiglasi, izitya, iimela, iifolokhwe, iipuni, iinkuni zokunqunqa njalo njalo.
-Intlama yamazinyo kunye neBrash.
-I-Iron yokurenta yasimahla yelaphu kunye nebhodi yentsimbi (Ufuna isicelo ngaphambili)
Ikufuphi kakhulu ne-Onsen (Hot Spring) kunye neepaki ezininzi zemixholo,
Kukho ibhasi ye-shuttle esuka kwi-Tobu World Squre (i-4mins ukuhamba) ukuya e-Nikko Edomura, ukuya kwi-Toshogu Shrine.
【I-Onsen (iNtwasahlobo eshushu) Ibhafu kawonke-wonke】
(1) Yudokoro Suzukaze (20mins Hamba)
Iiyure: 12:00 ukuya ku-20:00 (ukususela ngo-10:00 ngeempelaveki nangeeholide zesizwe) Kuvaliwe: NgoLwesithathu (okanye usuku olulandelayo ukuba uLwesithathu yiholide yesizwe)
Umrhumo: 900 yen
Ifakwe malunga nemizuzu ye-15 yokuhamba ukusuka e-Nikko Edoma, i-Yudokoro Suzukaze ineendawo zokuhlambela ezintle zangaphandle ezijonge indawo enemithi kunye noMlambo waseKinugawa. Le onsen ineebhafu ezishushu nezibandayo, kunye nesauna ekhoyo, ukongeza kwindawo yokutyela kunye neendawo zokuphumla.
(2) Kinugawa Onsen Koen Iwaburo (25mins Ngokuhamba kunye noLoliwe)
Iiyure: 10:00 ukuya ku-21:00 (Ukwamkelwa kude kube ngu-20:30)
Kuvaliwe: NgoLwesibini (okanye usuku olulandelayo ukuba ngoLwesibini yiholide yesizwe), iiholide zoNyaka oMtsha
Umrhumo: 500 yen
I-Kinugawa Onsen Koen Iwaburo yindawo yokuhlambela kawonke-wonke esandul' ukulungiswa eneendawo zokuhlambela zangaphandle ezitsha, ezinelitye. Indlu yokuhlambela ibekwe ngokulula kumgama omfutshane ukusuka kwisikhululo saseKinugawa Koen.
(1) I-Tobu World Square (i-4 mins Walk) yipaki yomxholo e-Kinugawa Onsen ebonisa i-1 / 25th i-replicas yezakhiwo ezidumileyo ezivela kwihlabathi jikelele. Iimodeli zibandakanya izikhumbuzo zakudala, ubuncwane benkcubeko kunye neNdawo zeLifa leMveli le-UNESCO zeHlabathi eziveliswe ngeenkcukacha ezinkulu ukuya kuthi ga kwiimoto, oololiwe kunye nabantu abancinci abazalisa iziza, kunye nezitiya eziguqukayo ngamaxesha onyaka.
(2) U-Nikko Edomura (i-Edo Wonderland) (i-33mins Walk / 2.7km) ipaki yomxholo wembali ehlaziya ubomi bedolophu yaseJapan ngexesha le-Edo Period ((INOMBOLO YOMnxeba EFIHLEKILEYO)). Ipaki ngenene yidolophu encinci eyakhiwe kwisitayile soyilo lwe-Edo kwaye inabantu basezidolophini kwimpahla yexesha, kwaye isetyenziswe njengendawo yokuseta imidlalo yeTV yexesha. Iindwendwe zePaki zinethuba lokunxiba nazo (iimpahla zinokuqeshwa ngentlawulo) kwaye zikhenkethe iivenkile ezisekelwe kwimbali yedolophu kunye neemyuziyam, zithathe inxaxheba kwimidlalo kwaye zibone imiboniso ephilayo kunye nethiyetha.
(3) IGrand Maze Palladium (35mins walk / 2.9km) yimaze enkulu yocingo ebekwe ngaphaya kwendlela esuka eNikko Edomura. Ukuze ugqibezele le labyrinth icela umngeni kufuneka ugximfize ikhadi kwinqaba nganye kwezine, enye kwikona nganye ye-maze, uze ufumane indlela yokuphuma. Kuthatha malunga nemizuzu engama-40 ukugqiba ngokomlinganiselo, kwaye iziselo ezibandayo zinikezelwa kwabo bagqiba ngaphantsi kwemizuzu engama-20. Akukho magumbi okuhlambela okanye oomatshini bokuthengisa kanye ngaphakathi kwimaze.
(4) I-Kinugawa Line Kudari River Cruise (i-23 mins ngokuhamba kunye nololiwe) kukukhwela kuMlambo i-Kinugawa kwi-flat bottomed, iinqanawa zokhuni. Iinqanawa zithatha malunga nemizuzu engama-40 kwaye zihamba kwiindawo ezininzi ezingaphuhliswanga zomlambo, zidlula amatye ngendlela efana nezilwanyana kunye nezinto ezahlukeneyo. Iingcaciso ezihlekisayo zibonelelwa ngabahambi ngephenyane ngesiJapan. Izihlangu zikhutshwa kwibhodi yezikhephe.
IIYURE 9:00 ukuya ku-15:45 (isuka rhoqo ngemizuzu engama-35, ulwamkelo luphela kwimizuzu eli-10 ngaphambi kokuhamba) / IVALIWE Phakathi kuNovemba ukuya ku-Epreli.
I-FEES 2700 yen (ugcino olucetyiswayo, lubandakanya ibhasi yokuya eKinugawa Onsen Station)
【Ilifa leMveli leUNESCO】
I-Toshogu Shrine (東照宮, Tōshōgū) (imizuzu eyi-40 ngololiwe) yindawo yokugqibela yokuphumla kaTokugawa Ieyasu, umseki weTokugawa Shogunate eyayilawula iJapan iminyaka engaphezu kwama-250 de kwangowe-1868. UbuThixo bokuKhanya okuKhanya kweMpuma". Ekuqaleni i-mausoleum elula, i-Toshogu yongezwa kwisakhiwo esimangalisayo esibonwa namhlanje ngumzukulwana ka-Ieyasu u-Iemitsu kwisiqingatha sokuqala se-1600s.
Le ndawo ihonjiswe kakuhle yetempile inezakhiwo ezingaphezu kweshumi elinesibini ezisehlathini elihle. Imikrolo yamaplanga emininzi nezixa ezikhulu zamagqabi egolide zazisetyenziselwa ukuhombisa izakhiwo ngendlela engazange ibonwe kwenye indawo eJapan, apho ubulula buye bagxininiswa ngokwesithethe kulwakhiwo lwetempile. Iindwendwe zinokuqaphela ukuba iToshogu iqulethe zombini izinto zobuShinto kunye nobuBhuda. Kwakuyinto eqhelekileyo ukuba iindawo zonqulo zibe neenxalenye zazo zombini ezi nkonzo de kwaliXesha leMeiji xa ubuShinto bahlukaniswa ngabom kubuBhuda. Kulo lonke elo lizwe, amaBhuda ashenxiswa kwizindlu ezingcwele kwaza kwapheliswa ngokufanayo, kodwa eToshogu ezi nkonzo zimbini zazixubene kangangokuba ukwahlukana akuzange kwenzeke ngokupheleleyo.
4.45 ·Izimvo eziyi-152
4.45 out of 5 stars from 152 reviews
4.45 · Izimvo eziyi-152
I-Kinugawa Onsen (鬼 怒川温泉) yidolophu ethandwayo yokuphumla eshushu eshushu ecaleni koMlambo iKinugawa kwiSithili saseTochigi.
Ngaphezulu kweminyaka eyi-1,200 yembali etyebileyo uNikko uthathwa ngokubanzi njengenye yeendawo ezingcwele zaseJapan. Ukongezelela kwiNdawo engcwele yeToshogu eyayinikelwe kuTokugawa Ieyasu, umseki weshogunate yaseTokugawa, iTempile yaseRinnoji kunye neFutarasan Shrine zakhethwa njengeZiza zeLifa Lehlabathi zeUNESCO ngowe-1999. iindwendwe unyaka nonyaka. Ukujonga phantsi ukusuka encotsheni yeNtaba iMaruyama, i-Kinu River Valley imbono ehambayo kungakhathaliseki ukuba lixesha lokutyelela kwakho. Ifikeleleka lula ngoololiwe beNikko kunye neKinugawa abasuka ngqo abavela eShinjuku, lo mmandla wenze indawo yeholide ebekwe ngokulula.
I-Kinugawa Onsen (iHot Springs) ifikeleleka ngokulula ukusuka eTokyo, kwaye yenye yezona ndawo zigqwesileyo zasentwasahlobo ezishushu eKanto. Ukuqala nje ngaphandle kwesikhululo sikaloliwe kunye nasezindleleni, iihotele ezininzi kunye ne-ryokan (inns) zibekwe ngokufanelekileyo ukuze zibonelele iindwendwe. Ukusuka kwiintaba ezijikelezileyo, ukujonga ezantsi eKinugawa (uMlambo iKinu) kubalaseleyo nokuba lixesha lonyaka. Ukufumana amava ukonwabela bonke ubuhle boMlambo iKinu ukuya kumxholo wentliziyo yakho, zama uhambo ngesikhephe ukuhla ngomlambo.
Ukufikelela: Thatha iKinugawa ukuya kwisikhululo saseKinugawa-onsen.
Umbuki zindwendwe ngu- Maru
Izimvo eziyi-1 361
Ngokusisiseko uQhagamshelwano ngokuthanjiswa okubhaliweyo okanye ukufowuna.
Inombolo yomthetho: M090009134
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- 日光市